N'okpuru Drawer slide Manufacturers & Suppliers - China Undermount Drawer Slides Factory
Mgbatị zuru ezu na-agba ọsọ ọsọ maka ihe nkedo nkedo waya
Okwu Mmalite:Mgbatị zuru ezu na-agba ọsọ ọsọ maka drawer nkata na-ejikarị eme ihe maka ihe nkedo nkata. Nke a na ụdị undermount drawer slide were kposara idozi iji slider waya nkata drawer. Inwe igwe TAIWAI zuru oke, nke nwere echiche di elu kacha mma ndi oru aka anyi ji nlezianya meputa ihe ngbaputa nke GERISS nke bu ihe kacha mma nke ulo oru ulo oru uwa.
Nodị No.: EUR33U
Triple ndọtị ala ugwu ugwu kichin waya nkata drawer slide
Okwu Mmalite:Nkeji atọ ndọtị ala ugwu ugwu kichin waya nkata drawer slide na-ejikarị eme ihe nkata nkata waya. Nke a na ụdị undermount drawer slide eji kposara idozi na kaboodu waya nkata drawer. Inwe igwe TAIWAI zuru oke, nke nwere echiche di elu kacha mma ndi oru aka anyi ji nlezianya meputa ihe ngbaputa nke GERISS nke bu ihe kacha mma nke ulo oru ulo oru uwa.
Nodị No.: EUR33U2